3 Izizathu zokuba kutheni ukusebenzisa i-Wordpress kungumbono olungileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izizathu ezi-3 zokuba kutheni ukusebenzisa i-WordPress kungumbono olungileyo
UJose Angel | | Uyilo lwewebhu, Wordpress
Sebenzisa iWindowsPress kuya kusiba yinto eqhelekileyo mihla le, yikholwe okanye hayi. Nangona, sonke siqala, sifuna eyona webhusayithi yobuchwephesha. Ngale nto sicinga ukuba inye kuphela indlela: Uyilo lwewebhu. Siyazi ukuba olu khetho luyabiza kwaye ayinguye wonke umntu onokulufumana. Inkampani ezinikele kwiwebhusayithi yethu, eyenza zero kunye nolondolozo olulandelayo. Kule meko sikhetha ukubuyela kuye nawuphi na umphathi womxholo onoluvo olubi malunga noku. Kodwa i-WordPress sisixhobo esinamandla kakhulu.
I-WordPress sesona sixhobo sokubloga sisetyenzisiweyo. Kodwa kude nokuma apho, ukusebenzisa iWindowsPress kungasombulula ishishini lakho nangaluphi na uhlobo. Nokuba yeyivenkile, iphephandaba ledijithali njenge-Creativos kwi-Intanethi okanye 'indawo yaseshashalazini yasekhaya' njengeNetflix. Kule nqaku siza kunika izizathu ezintathu zokuba kutheni ukusebenzisa iWindowsPress kusengumbono olungileyo.
1 Yenze le nto uyifunayo
2 Ukugcina imali kubalulekile ukuqala
3 Ngaba ilungile kuGoogle?
Yenze le nto uyifunayo
Uluntu lweWordPress lukhulu kwaye yiyo loo nto itsale umdla wabantu abaninzi ezivela kwiindawo ezahlukeneyo. Ngemibono emitsha evela kubathengi abatsha, abaphuhlisi bandise amathuba okusebenzisa i-WordPress ngeendlela ezingalindelekanga. Olu lungiso olungapheliyo sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni iWindowsPress ixhaphake kangaka-Ngokongeza ezinye izinto ezingaphezulu, unokwenza naluphi na uhlobo lwesiza olifunayo. Kwimeko yokungakwazi ukugqibezela umsebenzi wakho ne-WordPress enkulu, ngokuqinisekileyo uya kufumana iiplagi ezicetyiswayo luluntu olwenziwe ngumsebenzisi. Ezi zongezelelo zenza imisebenzi eyongezelelweyo kufakelo lwakho oluhambelana nokusetyenziswa kwayo.
Unokwenza iforum okanye inethiwekhi yakho yokuncokola. Ngokubamba kancinci, indawo yakho inokuthetha iilwimi ezimbini. Iplagi yenkqubo yetikiti lomsitho weWordPress iya kwenza ukuthengisa amatikiti omnyhadala womoya. Ngokwenene akukho mida kwinto onokuyiphumeza ngomonde omncinci., Olunye uphando olufanelekileyo lweGoogle, kunye neplagi efanelekileyo.
Ukugcina imali kubalulekile ukuqala
Njengoko besitshilo ekuqaleni, ukuba ufuna ukuqala kwenye indawo kodwa awukwazi ukuchitha imali eninzi, ukusebenzisa i-WordPress sisincomo esipheleleyo. Ayisiyo kwaphela ukuba iWindowsPress isimahla, ikwayimithombo evulekileyo. Ithetha ntoni loo nto kuwe? Kuthetha ukuba uluntu oluhlala lusanda luhlala lusebenza ngalo. Abantu abangaphandle kolawulo lweWordPress bandise ulwazi lwabo kunye nophuhliso ngokuzithandela. Kungenxa yoko iinguqulelo ezintsha, uhlaziyo, ukulungiswa kunye nezongezo zihlala zikhona. Ujongano olulula kwaye olunomdla. Yahlulwe yangamacandelo ahlukeneyo kwikholamu ebonisa ngamagama ukuba yeyiphi imisebenzi onokuyenza kwilinye lawo.
Ukudala indawo esisiseko ayifuni amava okanye ulwazi, kwaye akanaxesha. Ukuba uneprojekthi ethe ngqo nengathí sina engqondweni, ayongxaki nayo, kodwa kuya kufuneka ube unolwazi oluncinci. Kukho amawaka (ukuba ayizigidi) zemixholo yasimahla efumanekayo kulo naluphi na usetyenziso nantoni na onayo engqondweni, kwaye inani lihlala likhula.
Ukuba ukusebenza kungaphunyezwanga kwiwebhu oyenzayo nge-wordpress kwaye awunalo ulwazi olwaneleyo lokuyicwangcisa, ungafaka ii-plugins zasimahla okanye ezihlawulelweyo ukufezekisa ngokulula. Ngaphezu, kusoloko kukho uthotho Kufuneka ube neeplagi yeWordPress eya kuba luncedo olukhulu xa uqala ukwenza iwebhusayithi okanye ibhlog yakho.
Ndiyabulela koku, izifundo ezininzi kwiYouTube ziyafumaneka. Ukwenza iwebhusayithi yakho ngeeplagi zasimahla kunokugcina imali eninzi.
Ngaba ilungile kuGoogle?
Enye yeenzuzo ezincinci ezaziwayo, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba iWindowsPress inamanye amaqonga, kukuba ibekwa ngcono kuGoogle. Uhlobo olufanelekileyo lubalulekile, kwaye kuba lishishini elinzima, naluphi na uncedo lwamkelekile. Kusengqiqweni ukuba xa sityala ixesha nemali yethu sifuna ukuba ibenomtsalane kuluntu. Ke sinokwenza yonke imigudu yethu ibe yinzuzo. Okokuqala, i-WordPress ibhalwe ngendlela eyenza kube lula kwiinjini zokukhangela ukufunda kunye nenqanaba, Enkosi kwikhowudi elula. Okwesibini, ngokulula kokusebenzisa, kulula ukusebenzisa iWindowsPress ukuba ihlaziywe rhoqo.
Ngezi zizathu zilula, kuyacaca ukuba ukusebenzisa i-WordPress kuququzelela umsebenzi wabaninzi. Kwaye ukuba usabuthandabuza ubuchule obunokubakho kwishishini lakho, jonga kwizibalo zenethiwekhi yebhlog ye Iindaba zeBlogs, Yenziwe ngeWordPress.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Izizathu ezi-3 zokuba kutheni ukusebenzisa i-WordPress kungumbono olungileyo